ကိုမင်းကိုနိုင်၏ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ကိုမင်းကိုနိုင်၏ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
Posted by ကထူးဆန်း on Jan 15, 2012 in Facebook | 17 comments
နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက် ပြောကြားခဲ့သော ကိုမင်းကိုနိုင်၏ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
by Eleven Media Group on Saturday, January 14, 2012 at 1:20pm
ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ် ပြီးတော့ ထောင်ထဲက ထွက်လာနိုင်တာ အကြောင်းရှိ ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်လို့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ထွက်မလာနိုင်ပဲ ပက်လက်ကလေး အသက်မပါဘဲ ထွက်သွားရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါဘဲ။ ကျောင်းသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အများကြီးပဲ ရှိပါတယ်။ အခုလို ကျွန်တော်ကို မိဘ အရင်းတွေနဲ့ အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ပြည်သူလူထု တွေရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီနေ့အထိ နေနိုင်ခဲ့တာပါ။ အဲတာကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်။
အခု ပြည်သူလူထုကြီးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိဘများရှေ့မှာ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါ တယ်။ အဲဒီ ပြည်သူလူထုကြီးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယမိဘများပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ မိဘရင်းနှစ်ပါးက မွေးတာမှန်ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ၈၈မှာ နိုင်ငံ့ဝန်ကို ထမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒေါင်းအလံကို ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ဆီဆေးတွေနဲု့ခြယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အခုမှ ကျွန်တော် အမေအိမ်ကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်ရပါပြီ။ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေ များပါပြီ။ ပထမ တစ်ခေါက်တုန်းက ကျွန်တော် ၁၆နှစ်ထောင်ကျပြီး ကျွန်တော် တိတ်တဆိတ်လေး အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ရပါတာပါ။အခုကျတော့ ခေတ်ပြောင်းလာတယ်လို့ လွယ်လွယ် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ အားလုံးလည်း သိကြပါတယ်။ လောကကြီးမှာ အလကားရတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ သရက်မြို့က ထွက်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ ထူပြီးတော့ လမ်းတလျှောက်မှာပိတ်ဆို့ထားတာ စင်မြင့်တွေ ထားပြီးတော့ အသံချဲ့စက်တွေ ထားပြီးတော့ နောက်ဆုံးဗျာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတောင် လာပြီးတော့ အကူအညီပေးရတယ်။ ပေးဆပ်ခဲ့လို့ပါ။ ထိုက်ထိုက် တန်တန် ပေးဆပ်ခဲ့ရလို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပြန်ရတယ်လို့ ယူဆပါ တယ်။
နောက်ထပ်တစ်ဆင့် ဒီမိုက ရေစီ ပိုပါတယ်။ လိုချင်ကြတယ် မ ဟုတ်လား။ လိုချင်တယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြိုး စားရဦးမယ်ဆိုတာလည်း လက်ခံ တယ်မလား။ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပေးဆပ်ဖို့အတွက် ခွန်အားတွေရော ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့က ဓားမှန်းသိအောင်လို ဓားအိမ်ကောင်းကောင်း ပြစားရုံနဲ့ ဓားမှန်းသိတယ် ဆိုရင်တော့ လုံလောက်တယ်ပေါဗျာ၊ မဟုတ်ရင်တော့ တစ်ခါ တစ်ခါကျရင် ဓားမှန်းသိအောင် ဓားအိမ်ထဲကနေ ထုတ်ပြရတာလေးတွေလည်း ရှိတာပေါ့။ အဲဒီ သတ္တိမျိုးကော ရှိသေးလား။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် လောလော ဆယ်ကတော့ စည်းကမ်းရှိပြီး ညီညွတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို နောက်ဆုံး ပြောပြပါ့မယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို လုံးဝ နှောက်ယှက်တာ မရှိဘူး။ တားမြစ်တာ မရှိဘူး။ စိတ်ငြိုငြင်အောင်လို့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ လမ်းတွေပိတ်ဆို့သွားတာရှိရင် ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ်။ ဖယ်ခိုင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကြောင့် လမ်းပိတ်သွားတယ် ဆိုတာမျိုး အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ ပြရမယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်အောင်ဆိုရင် စည်းကမ်းမဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စပြီးတော့ ရှောင်ကျဉ်ရမယ်။
အားလုံးဟာ အနှစ် ၂၀ကျော် ဘဝတွေ များစွာ၊ အသက်တွေ များစွာ ပေးခဲ့ပြီးမှ ရခဲ့တာ၊ လမ်းမှာ ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ လယ်ထဲတွေ ကနေ တက်လာပြီးတော့ ရွာသူမလေးတွေက ငိုတာ၊ ဘာ ဖြစ်လို့ ငိုတာလည်းလို့ မေးကြည့် တဲ့အခါ တစ်ချို့အရပ်တွေမှာ သူတို့ သားတွေ၊ သူတို့မောင်တွေဟာ ထောင်တွေထဲမှာအသက်ပေးလိုက် ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ အဲဒီတော့ သူတို့က ပြောတယ်။ မင်း ကံ ကောင်းပါတယ်ကွာတဲ့၊ ငါတို့မောင် လေးဆိုရင် မရှိတော့ဘူးတဲ့၊ ကျွန်တော် အင်မတန်ခံစားရတယ်။ နောက် အဘိုးကြီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။ ငါဟာ လူအို တစ်ယောက်ပါကွာတဲ့။ နောက်ထပ်တစ်ခါ မင်းတို့ကို ထောင်မကျစေချင်တော့ဘူး။ နောက်ထပ်တစ်ခါ မင်းတို့ကို မမြင်ရက်ဘူး။ အဲဒီ အဖြစ်မျိုးကို ငါမကြုံချင်တော့ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ အဲဒီလို မကြုံစေချင်ဘူး။ အဲဒီလို မိတစ်ကွဲ ဖတစ်ကွဲနဲ့ မိဘပြည်သူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မမြင်ရက်တော့ဘူး။ အမှန်တကယ်ကတော့ မျက်ရည်ကို သုတ်ပေးရပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကို မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ဘ၀၊ အဲဒီလို အနိဌာရုံ၊ စနစ်ဆိုးကြီးတွေကို မချုပ်ငြိမ်းစေချင်ဘူးလား၊ ညနေပြန်လို့ရှိရင် မိသားစု ထမင်းဝိုင်းတွေ အိမ်မှာ လူစုံတာမျိုးကို ကျက်သရေ မရှိဘူးလားဗျာ။ တကယ်ပါ။ ဘယ် မိသားစုမဆို မိသားစုစုံညီ ထမင်းဝိုင်းလေးတွေကို မြင်ချင်ကြမှာပါ။ နောက်ဆုံး နိုင်ငံရေး လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ ထောင်ကျကျ၊ မကျကျ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တိုင်းတပါးမှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ အသက်မွေးခဲ့ရတဲ့ မိသားစုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကွဲကွာနေရတယ်။ အားလုံးက ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ် နွေးနွေးထွေးထွေး နေပြီးတော့ ညနေကျရင် လူစုံအိမ်၊ လူစုံတဲ့အိမ် လူစုံတဲ့ ထမင်းဝိုင်းဖြစ်အောင်လို့ အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နိုင် ကြမယ် မဟုတ်လား။
ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ယုံကြည်ချက် အဲတာတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲကြမယ်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်း အစွဲအလန်းမထားပဲ လက်တွဲမယ်။ သဘောတူပါသလား။ ဘယ် အဖွဲ့အစည်း ဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဝင် သည် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ပေါ့။ ခုနက တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘာပြောချင်လဲတဲ့။ အဲတာကတော့ နောက်ဆုံးကျတော့ ကျွန်တော်တို့ မိဘပြည်သူတွေရဲ့ရင်ခွင်ကို ခွပ်ဒေါင်းအလံနဲ့ အတူ အိုးဝေ အိုးဝေ အသံပေးပြီးတော့ ဟိုးတုန်းက၊ ၈၈ က ဒေါင်းတွေ ပြန်ရောက်ပါပြီ။ မိဘ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ခွင်ကို ကျွန်တော် ပြန်ရောက်ပါပြီလို့ ပြောရင်း နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
သူကြီးရေ .. ကျွန်တော် ဝေခွဲမရတာ တစ်ခု ရှိလို့ပါ။ မကြာခဏ အခြား ဆိုဒ်များမှာ အများစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ သတင်းတွေ တွေ့ပြီးတင်ချင်ပေမဲ့ သူကြီးစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရာ ကျမလားဆိုပြီး မတင်ဖြစ်ပါဘူး ။ Forum မှာ သွားတင်ရင်လည်း အများ သိပ်မတွေ့ မိကြဘူးထင်ပါတယ်။
သူကြီး မှတ်ချက်လေးသိချင်ပါတယ် ။ Forum မှာသာ တင်လို့ ရမယ်ဆိုရင်လည်း နောင် Forum မှာသာ သွားတင်ပါ့မယ်။ ဒီပိုစ်ကိုလည်း စည်းကမ်းမညီပါက သူကြီး Forum သို့ ပြောင်းပေးပါခင်ဗျာ။
ဘသူမှ နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုးမပေးဆပ်ကြစေချင်တော့ပါဘူးဗျာ.
နေ့ တိုင်း မိသားစုနဲ့ထမင်းလက်စုံ စားနိုင်ကြပါစေ.
ဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့် မခံစားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ အတွက်.မပြောတတ်အောင်ပါပဲ
သူရို့ အသက်ပေးရကျိုးနပ်အောင်လဲ..စည်းကမ်းရှိရှိ လက်တွဲကြစေလိုပါတယ်ဗျ
ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ယုံကြည်ချက် အဲတာတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲကြမယ်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်း အစွဲအလန်းမထားပဲ လက်တွဲမယ်။ သဘောတူပါသလား။ ဘယ် အဖွဲ့အစည်း ဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဝင် သည် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ တစ်ပိုင်ြတစ်နိုင်ပေါ့။
လက်ခံတယ်ဗျာ …. အဖြစ်သင့်ဆုံးပဲ …
ကဲ တို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်က စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လို့ပြောနေပြီ။
နောက်ကလိုက်ပြီး နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့လား လို့ မေးကြည့်ပါရစေ။
ကောင်းတာပြောတာကို လက်မခံချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အစုပ်ပလုပ်တွေကို လွှင့်ပစ်မှ
ကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာ နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်။
မြန်မြန်လုပ်တော့ ဟိုမှာ ခေါ်နေပြီ။
ခေါင်းဆောင်လုပ်လိုသူများဟာလည်း နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြမဲ့ လူငယ် ညီတို့ အခု ကတည်းက နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင် ဆြာသစ်ပြောသလို အရင်ကြိုးစားရအောင်။
Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ။
ဆိုင်ရာခရက်ဒစ်မပေးပဲ.. ကူးတင်တော့.. ဟိုမှာဖက်က.. သတင်းတခုရဖို့တော်တော်လိုက်ထားရတာတွေရှိမယ်ပေါ့.. ခရက်ဒစ်မပါတော့.. သူတို့အနေနဲ့.. ခိုးတယ်ဆိုပြီး.. မန္တလေးဂေဇက်အမည်တတ်ပြီး .. စာပို့… သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ.. သတိပေးစာတင်ပြီး.. ကန့်ကွက်ကြတာရှိပါတယ်..။
ခိုးတယ်ဘာလို့သုံးကြသလည်း ဆိုတော့.. ဒီမှာတင်ရင်.. ပွိုင့်ရတယ်မဟုတ်လား… ပွိုင့်ဟာ.. တချိန်မှာ ငွေဖြစ်မှာဆိုတော့.. ဒီလိုထပ်ခါလုပ်နေရင်.. ပွိုင့်၁သိန်းလည်း လွယ်လွယ်ရသွားနိုင်လို့ပါနော..။ ( ငွေထုတ်မထုတ်က တပိုင်းထားပြီး.. မူရင်းပိုင်ရှင်ဖက်က ငဲ့ကြည့်စဉ်းစားပေးဖို့ပါ…)
ဆိုင်ရာကို ခရက်ဒစ်ပေးပါ…။ မူ၇င်းလင့်ခ်ပေးပါ..။ အဲဒီသတင်းကို သတင်းသုံးသပ်ချက်လိုဖြစ်အောင် ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်.. အတွေးအမြင်ပေါင်းထည့်ပါ..။ သတင်းတူတွေ စုပြီး ကွန်မန့်ထဲ… ပေါင်းထည့်ပေးပါ..။
ကိုယ့်ပို့စ်မှာ… ကော်မန့်ပေးဆွေးနွေးလာသူတွေကိုလည်း….ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ် ဆိုရင်.. အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား…
(ဆိုင်ရာ သတင်းဌာန..ဘလော့ဂ်မူရင်းရေးသူတွေက မကန့်ကွက်လာခဲ့ရင်ပေါ့)
တကယ်တော့.. သတင်းကို အပြန်အလှန်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးကြရင်း.. ကောင်းတာလေးတွေ သိနိုင်.. စုစည်းထားနိုင်ပြီး… စာဖတ်သူတွေအကျိုးများစေချင်တာပါပဲ..။
နောက်နောင်နှစ်အတွက်လည်း… . သတင်းတူရာ.. ဆိုင်ရာတွေစုထားသလိုဖြစ်တာမို့.. (ကိုးကားမှီငြမ်းလိုသူများရှိရင်လည်း)… တန်ဖိုးတက်သွားမှာပါ…။
အဲဒီလို စီစဉ်ပြီး တင်ပေးစေလိုကြောင်းပါခင်ဗျား…။
ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ။ ကြိုး စားပါ့မယ်။
ီိချီးကျူးပါတယ် ညီလေးမင်းကိုနိူင် အစ်ကိုတို့က တင်အေးကြူနဲ့ကျောင်းနေဘက်တွေပါ သူလဲ ၁၉၇၅ ခုနှစ်လောက်က မှိုင်းအရေးတော်ပုံ့မှာ ကျောင်းသားဆိုးဆိုပြီး ထောင် ၁၄နှစ်ကျခဲ့ရတယ် နောက်စစ်အစိုးရ
တက်တော့ ယူဂျီဆိုပြီး ညီလေးလိုမျိုးအပြစ်ဆင်ထောင်ချလို့ သု့သက်တန်းအများစုက ထောင်ထဲမှာနေရတာ
များပါတယ် စုံစမ်း ကူညီပေးစေလိုပါတယ်htoosan လဲဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ်
ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၂
ရန်ကုန်တိုင်းမ် Yangon Media Group
ဦးစိန်ဝင်း၊မိုးသီးဇွန်အပါအ၀င်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ အမိမြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာနိုင်ကြောင်း
” ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခဲ့တာတွေ၊ပြည်ပမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခဲ့တာတွေမရှိရင်တော့သူတို့ 
ဘာမှအရေးယူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟု ” ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Press release on Lt. General Ko Ko’s invitation
Contact: Moe Thee Zun
Press release on Lt. General Ko Ko’s invitation to exiled political leader, Ko Moe Thee Zun
Published in online media “The Yangon Times”, Lt. General Ko Ko has extended an invitation to exiled political leaders, including Ko Moe Thee Zun who ledastudents’ rebellion after the 1988 uprisings, to return to Burma in order to participate in the ongoing political processes. However, an official offer of invitation to return to Burma and participate in genuine political processes is yet to be forthcoming.
We are thankful to Lt. General Ko Ko for his offer. We also recognize that the recent release of the ‘88 student leaders and other prominent democracy advocates is significant and it isamove Burma and the world is reacting with joy and cheer. The government has indeed followed up on the promise it has made, by taking this first crucial step towardanational reconciliation in Burma.
Now we all will be watching if the government will release the remaining political prisoners and continue with an all inclusive national reconciliation.
Ko Moe Thee Zun and his political affiliates will be weighing on the issues of returning and participating in current political processes in Burma.
Ko Moe Thee Zun is currently meeting with various exiled political leaders, intellectuals, and oversea business leaders in anticipation to participate inacomprehensive peaceful national reconciliation and modernization of Burma.
မည်သူမဆိုကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းက ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြမယ်ဆိုရင် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာရရှိမှာအသေအချာပါပဲဗျာ…ကျနော်တို့အားလုံးသည်လည်း တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြသည်ပေါ့ဗျာ(ကိုသစ်မင်းပိုစ့်မှ)….
သူရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး သတိရလို့ မှတ်မိသလောက် ဖော်ကြည့်တာ။:D
“ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ယုံကြည်ချက် အဲတာတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲကြမယ်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်း အစွဲအလန်းမထားပဲ လက်တွဲမယ်”
။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်အောင်ဆိုရင် စည်းကမ်းမဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စပြီးတော့ ရှောင်ကျဉ်ရမယ်တဲ့
တနင်္ဂနွေ, 15 ဇန်နဝါရီ 2012
By မသိင်္ဂီထိုက် VOA မြန်မာပိုင်း
ကျွန်မ တို့ အတွက် အတုယူဖို့ ဒီလို Role Model တွေ များလာလေ၊ ပြည်သူလူထု အတွက် အတတ်သင်ဖို့ ပိုလွယ် လေဘဲ နေမှာပါ။
တကယ်မှာတော့ ဒီလို ပြည်သူကိုချစ်တဲ့၊ ပြည်သူကပါချစ်တဲ့ Role Model ဖြစ်ဖို့ တော်ရုံ နဲ့ ဖြစ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ( သို့ ) New Independent Day ကိုတော့ တကယ်လွတ်လာတဲ့သူတွေထက်ကို ပိုပြီး ၀မ်းသာမိပါကြောင်း
အမေစုကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ သင်္ကေတ။ ကိုမင်းကိုနိုင်က မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့စံပြ။